Maroon5နဲ့BTS အဖွဲ့ သီချင်းတွေအတူတူတင်ဆက်တော့မှာလား? – Trend.com.mm
ကိုရီးယားကေပေါ့ပ်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ BTS ဟာ ၂၀၁၇အတွင်းမှာ အအောင်မြင်ဆုံးကေပေါ့ပ် အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။Steve Aoki နဲ့ Desiigner ဆိုတဲ့အမေရိကန်ဒီဂျေသမားတွေ Remix လုပ်ပေးထားပြီး သူတို့အဖွဲ့သီဆိုထားတဲ့ “MIC Drop” သီချင်းဟာ US တစ်ခွင်မှာ ကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှု တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အခု ၂၀၁၈မှာရော ဒီထက်ပိုတဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေ ရရှိတော့မှာလား?
မကြာသေးခင်က နာမည်ကျော်ဂီတအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေအများအပြားပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Maroon5အဖွဲ့နဲ့ BTS တို့ပူးပေါင်းပြီး တင်ဆက်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။BTS အဖွဲ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ သူတို့နောက်ထပ်ပူးပေါင်းမယ့်အဖွဲ့ဟာ Maroon5အဖွဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
ဇန်န၀ါရီ ၁၈၊ဒီနေ့မနက်စောစောပိုင်းတုန်းက ပရိသတ်တစ်ယောက်ဟာ “ကျေးဇူးပြုပြီး BTS အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပေးပါ”လို့ Maroon5ရဲ့ တွစ်စ်တာပေါ်မှာရေးခဲ့ပါတယ်။Maroon5ကလည်း ပြုံးနေတဲ့အီမိုဂျီလေးပို့ပေးခဲ့ပြီးပရိသတ်ရဲ့စာကိုပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့လက Maroon5ဟာ BTS အဖွဲ့ကို ဖောလိုးလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီး ပရိသတ်တွေကတော့ သူတို့အဖွဲ့၂ဖွဲ့ ပေါင်းစပ်ဖို့ကိုမျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။
အခုချိန်ထိတော့သတင်းအတိအကျမသိရသေးပါဘူး။ပရိသတ်တွေကတော့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဲလွန်စတွေများရမလားဆိုပြီး အင်တာဗျူးသတင်းတွေမှာရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါတယ်။